गण्डकी प्रदेश Archives - Page 104 of 116 - Purbeli News
बेनी, म्याग्दी. ‘आयो गयो फेरियो व्यवस्था । आफ्नो भने उस्तै छ अवस्था ।। कल्ले के गर्छ ? पाय‘सी सबैले आफ्नै पेट भर्छ ।। गुल्मीको वडागाउँ घर बताउने ५७ वर्षीय दिलबहादुर गन्धर्वले सारंगी रेट्दै यो गीत गाउँदा म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–४ बरङ्जामा धेरैका आँखा रसाए । २०३५ सालमा १७ वर्षको उमेरदेखि सारंगी भिरेर विभिन्न जिल्लाका गाउँगाउँमा गीत गाउँ...
रामपुर, पाल्पा / पाल्पाको बगनासकाली–६ यम्घाको दर्पुकमा पहिलोपटक बस पुगेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कच्ची सडक चौडा पारिएपछि बुधबार पहिलोपटक गाउँमा बस पुगेको हो । लु १ ख ७७७६ नंका बस चालक कुलबहादुर गाहाले पहिलोपटक गाउँमा बस पु¥याउनुभएको हो । स्थानीयवासीले हर्षित हँुदै बसका चालकलाई फूलमालाले स्वागत गरेका थिए । गाउँपालिकाको आव २...
बाबियाचौर, म्याग्दी / धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको जेल्तुङ र सिम्कोश गाउँको सिमाना म्याग्दी खोलामा झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ । गाउँपालिका र टिबिएसयुको सहयोगमा भौगोलिकरुपमा विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित सिम्कोश बगरगाउँका बासिन्दाले १०२ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माण गरेका हुन् । २०७४ असारमा म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले म्याग्दी नदीमा आएको बाढील...
नवलपरासी / पश्चिम नवलपरासीका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा ‘भ्रष्टाचारमुक्त प्रभावकारी सेवा’ अभियानको थालनी गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा यस्तो अभियानको थालनी गरिएको हो । सरकारी कार्यालयमा सुशासन तथा पारदर्शीता कायम गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस...
विद्यार्थी बिरामी हुन थालेपछि पढाइ प्रभावित
जाजरकोट / यहाँको छेडागाड नगरपालिका–१२ स्थित नारायणी माविमा एक हप्तादेखि विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि पठनपाठन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म विद्यालयमा कक्षा ७ देखि कक्षा १० सम्मका छात्रा ‘भूत आयो’ भन्दै कराउँदै बेहोस हुने गरेको सहायक प्रधानाध्यापक उत्तम हमालले जानकारी दिनुभयो । छात्राले यस्तो अनौठो व्यवहार देखाउन थालेपछि दैन...
किशोरीलाई पनि आइरन चक्की खुवाइने
कालीकोट / जिल्लामा सुत्केरीलाई खुवाइँदै आएको आइरन चक्की किशोरीलाई पनि खुवाइने भएको छ । जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय कालीकोटको आयोजनामा जिल्लाका तीन नगरपालिका र छवटा गाउँपालिकामा आइरन चक्की निरन्तर खुवाइने भएको हो । खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गतका किशोरीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकाका स्वास...
फलेवास / पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नं ७ रोहोटेमा बुधबार दिउँसो जिप दुर्घटना हुँदा नौजना घाइते भएका छन् । कुस्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङ्गबाट कुस्माबजारतर्फ आउँदै गरेको ग १ ज ६०६५ नं.को जिप ब्रेक फेल भइ दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा घाइते हुनेहरुमा सबैजसो कुस्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङ्गका बासिन्दा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा घाइते भएका कुस्...
दमौली / तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ पाटनस्थित सेती नदीमा पौडी खेल्न गएका एक युवक आज डुबेर बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा रिसिङ घर भई हाल व्यास नपा–२ बस्दै आएका १६ वर्षीय रामबहादुर थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । बेपत्ता युवकको प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले खोजी तीव्र बनाएको बताइएको छ । Purbeli TV
पोखरेबगरमा किसानलाई औजार हस्तान्तरण
बेनी, म्याग्दी / अन्नपूर्ण गाउँपालिका पशु सेवा शाखाले कालीगण्डकी भेडापालन स्रोत विकास केन्द्रमा आबद्ध किसानलाई अतिआवश्यकीय सामग्री वितरण गरेको छ । मंगलबार गाउँपालिका केन्द्र पोखरेबगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत दाहालले किसानलाई त्रिपाल, जुकाको औषधि र विभिन्न किसिमका मेशिन...
दमौली, तनहुँ / पृथ्वी राजमार्गको पूर्वको मुग्लिनदेखि पश्चिमको कोत्रेसम्म हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सेफ्टी फर्निचर राख्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त राजमार्गको ७२ किमी सडकखण्डमा त्यस्तो फर्निचर राख्ने तयारी भइरहेको हो । मुग्लिनदेखि कोत्रेसम्मको सवारी दुर्घटना रोक्न सेफ्टी फर्निचर राख्ने तयारी भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज ए...